WFP Yopemha Imwe Mari Yekubatsira Vanhu Mamiriyoni Mana muZimbabwe
Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWorld Health Organization raisa chikumbiro cheimwe mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemana kana kuti US$204 million yekubatsira vanhu mamiriyoni mana vemuZimbabwe vatarisana nenzara.
Nzara iyi iri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura, kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu uye chirwere cheCovid-19 chapa kuti vakawanda varasikirwe nemabasa.
Nyaya yekuoma kwezvinhu iri kuuya hayo apo gurukoota rezvemari Muzvinafund Mthuli Ncube vari kuti mitengo yezvinhu iri kudzika.
WFP inoti mwedzi yakaomesesa iri kutanga ikozvino kusvika muna Kurume gore rinouya apo vanhu vanenge votanga kukohwa. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vatarisana nenzara mamiriyoni matanhatu nezviuru zvipfumbamwe kana kuti 6,9 million.
Huwandu uhu hunosanganisirawo vanhu mamiriyomi maviri nezvuru mazana matatu mumadhorobha vatarisana nenzara inotyisa. Mumiriri weWFP muZimbabwe Amai Francesca Erdelmann vanoti mari iyi ikasawanikwa nechimbi chimbi vanhu mamiriyoni mana vanoyaura nenzara zvisina mukare akamboona.
Ongororo yakaitwa nehurumende nemamwe masangano inonzi ZIMVAC inoti vanhu mamiriyoni manomwe nezvuru mazana matanhatu kana kuti 7,6 million vakatarisana nenzara munyika.